माओत्सेतुङ्गको जीवन र कार्य आफैमा अतुलनीय छ। ४० करोड जनसंख्या भएको देशमा २८ वर्षको उमेरमा एक दर्जन साथीहरूसँग मिलेर कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गर्नु र त्यसको ३० वर्षभित्रै सत्तामा आउनु ! यो कुनै मामुली उपलब्धि होइन। अलेक्जेन्डर, सिजर लगायतका युरोपका सम्राटहरु र नेपोलियन, विस्मार्क र लेनिन कसैले पनि माओको उपलब्धिको बराबरी गर्न सक्दैन। किनकि कुनै पनि देश चीन जत्तिको प्राचीन...
पृथवीमा जन्मेका मानव जाती बीच धर्म, आस्था र अर्थको आधारमा भेदभाव देखिन्छ । बसोबास गरेको क्षेत्र, भाषा र जातले पनि एक आपसमा भेदभाव विभेद गरी एकले अर्कोको भावनामा चोट पुर्याउने काम भईरहेका छन् । जातीय भेदभावको कारण प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएका जोडिहरुले बिवाहको मुर्त रुप दिन सकि राखेका छैन ।ज्यान गुमाउनु परेको छ । अन्तरजातीय बिवाह गरेका महिला पुरुषहरुमा पछि...
उहिले उहिले नेपालका कम्युनिष्ट हरूलाई “चिनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओड्ने’’ पार्टी भनेर आरोपित गरिन्थ्यो । नेपाली कम्युनिष्टहरूपनि “चिनका माओ हाम्रा माओ र चिनका अध्यक्ष हाम्रा अध्यक्ष ” भन्न तयार हुन्थे । त्यो परिस्थिति अहिले छैन । लामो समय सम्म मार्क्सवाद–लेनीनवाद र माओत्सेतुङ विचारधारा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मार्ग दर्शक सिध्दान्त रह्यो । अहिले नेकपाले मार्क्सवाद–लेनीवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको...
यौन इच्छा र करणीः मानिस देखि हरेक प्राणीलाई आवश्यक पर्ने यौन चाहना र यसको प्रयोग हेरियो भने कसैले सिकाउन नपर्ने र पढ्न नपर्ने यस्तो ज्ञान प्राणीको उमेर अनुसार आफसे आफ विकसित हुने यौन चाहनालाई वैज्ञानिक रुपले प्रयोग गरे यो बरदान हुने र अवैज्ञानिक तरिकाले गरे वा जबर्जस्ती गरे अपराध हुने यौन विधिशास्त्रले बताएको पाइन्छ । हरेक प्राणीको वंश वृद्धिको...
सम्बन्ध बिच्छेदः महिला पुरुष जन्मन्छन हुर्कन्छन पढ्छन र योग्य भई २० बर्ष पछि बिबाह गर्छन, कसैले प्रेममा फसेर २० बर्ष भन्दा अगाडि नै बिबाह बन्धनमा बाधिन पुग्छन र बिबाह गर्न मिल्ने उमेरमा काखमा बच्चा च्यापेर वकिलको अफिसमा मेरो पतिले खान लाउन दिएनन, कुटपिट गर्यो, घरबाट निकाल्यो, कसै संग बोल्यो कि शंकाले हेर्ने, अर्को केटि बिबाह गर्यो भनि बिभिन्न कारणले...
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभएको छ । आजदेखि शुरु भएको मुलुकको आन्तरिक उडानको अवस्था, सुरक्षित उडानका लागि एयरलाइन्सले अपनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलगायतको अवलोकनका लागि मन्त्री भट्टराई विमानस्थल पुग्नुभएको हो । पर्यटनमन्त्रीका साथमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेललगायतका उच्च अधिकारी पनि विमानस्थलको अवलोकनमा सहभागी हुनुभएको थियो । पर्यटनमन्त्रीले आन्तरिक टर्मिनलमा...
पुरानो कानून खारेज भई नयाँ कानून लागू भएको छ । सबै जनताले कानून जान्नै पर्दछ भन्ने सिद्दान्त रहेको छ । मैले कानून जानेको छैन, थाहा छैन भनेर कानूनी क्षमा पाईदैन । जानेर वा नजानेर कुनै गल्ती गरेमा वा कानूनले गर्न हुदैन भनेको कार्य गरेमा त्यसको जबाफ देही आफै हुनु पर्दछ । जसले गल्ती गर्छ सजायको भागीदार पनि उहि नै...
मनहरी–लामो समय जनयुद्धमा सहभागी कमाण्डर ओमबहादुर ग्लान (प्रदीप) यतिखेर बागमती प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ । युद्धको राम्रै अनुभव बोकेका ग्लान पश्चिम मकवानपुरको विकास र समृद्धिमा एउटा भिजनसहित अघि सर्नु भएको छ । तर, उहाँसहित टिमको एउटा सपनामाथि बागमती प्रदेश सरकारले २०७७ साल असार १ गते संसद सचिवालयमा पेस गरेको बजेट बक्तब्यमार्फत कुठाराघात भएको छ । सपनामाथि कुठाराघात मात्रै...
हिजो देखी आएका समाचारहरु मध्ये जाजरकोटका युवा नवराज वि.क.को मृत्युको समाचारले म र म जस्ता धेरैै युवाहरुको मस्तिष्कमा कालो बादल मडारिएको छ । अनेकौं प्रश्नहरु मस्तिष्कमा फनफनी घुमिरहेका छन् । जात नमिलेकै आधारमा कसरी हामी जस्तै युवा मारिन सक्छ ? हामी कुन युगमा छौं ? करिब २ लाख बर्ष पहिले होमो स्यापियन्स(मानव जाति)को उत्पत्ति भएको मानिन्छ । हामै्र विधा...
श्री सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौ बिषय : ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा महोदय, अहिले मुलुकमा भारतबाट सिर्जित सिमा समस्याका सन्दर्भमा समस्या समाधानका लागि निम्न बुदाहरुमा काम गर्नको लागि एक नागरिकको हैसियतले तत्काल नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछु । १) राष्ट्रिय अखण्डतामा, स्वाधीनता एवं सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ, बिमिस्टेक, सार्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघर संगठनमा...